Uyila njani? Ngesandla okanye ngomatshini? | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Iindlela iindlela ze-analog okanye zedijithali, Lo ngomnye wemibuzo ehlala isiza ezingqondweni zabaqulunqi begraphic.
Abaqambi banokuthathwa njengabanyanisekileyo ngokwendalo, bathanda ukuya ngokuchaseneyo neenkozo okanye bakhethe nje ukuthembela kwiifashoni ezizayo. Kungakhathaliseki ukuba yintoni, inyaniso kukuba bangabantu bathanda okanye bathanda nje ukudala nangaphandle koku, kubo ukucinga yinto engafanele ukuba nemida.
Kwisizukulwana sanamhlanje sabaqulunqi, esinokuthi sibabize abayili bomthonyama, impendulo isenokuba icacile. Kusenokwenzeka ukuba bakhule bobabini ngokobuqu nangobungcali, phakathi kweekhompyuter, izixhobo eziziimobhayili kunye nehlabathi elibonakalayo apho kunokufumaneka khona zonke iintlobo zonxibelelwano kunye nolunye uhlobo lweendaba.
Kwaye kwabo bafuna ukubaphambili kwethu, abo bathe bakwazi ukuqeqesha nokuphuhlisa ubume bendalo Kwaye kwenziwe ngezandla, ukuhlasela kwe-pixel kumke ekubeni sisiqalekiso kuye kwaba Isixhobo esibalulekileyo. Kule mihla kukho neekiti ezisisiseko zokuba bakwazi ukukhetha iiphalethi zombala ngaphandle kwesidingo sokubona uluhlu lwePantone ebomini bethu kwaye oko kunokwenzeka nakwamanye amacandelo, kubonakala ngathi nabani na angabizwa ngokuba ngumyili okanye unganakho qaphela yonke into eyingcali ngalo mbandela, ngenxa yenyani elula yokwazi ukusebenzisa isoftware ngokuchanekileyo, mhlawumbi kunokuba lula ukuzibuza umbuzo wendlela esiyila ngayo okanye sithanda ukuyila njani, kuba nangona yonke into iimpendulo zingenakucaca, kodwa malunga.
Kwabaninzi, uyilo lumele endaweni yoko kunje ukwenza izinto ngesandla, mhlawumbi isincedisi kwaye loo nto yidijithali iyafana naleyo ikhoyo ngoku kunye ne-analog yakudala.
Singacinga ukuba kukho iimpendulo okanye izimvo zazo zonke iintlobo zeencasa, nkqu nakwabanye, kunokuba kunjalo ukuba ikhompyuter iyancedisana nokusebenza, inokuba kunjalo ukunciphisa iimpazamo, ukuthintela into eyaziwa ngokuba yinto yothusayo. Nangona kunjalo, kangangexesha elithile ngoku, kukhangeleka ngathi sisasazeni lwento efanayo ngakumbi, kwinto enokuba yiyo deja-vu ngonaphakade.
Iimpawu ezinjengezinye iilogo, iintengiso ezinemifanekiso efanayo yogcino, notshintsho kwikopi, iwebhusayithi, iibhena, iifolda, phakathi kwezinye izinto ezininzi, apho kuncinci kakhulu ukufikelela Guqula igama lenkampani. Ngale ndlela singakwazi ukuqhubeka noko kubonakala kungalihlazo kwinto eyaziwayo njenge uyilo lwedijithali.
Umbuzo oza kuthi gqi engqondweni yile yenzekileyo kuyilo olwenziwe ephepheni? Njengomzekelo esinokuwuthatha, ukuba utshintsho olucelwe ngumthengi ngomzuzu wokugqibela alunakusonjululwa ngonqakrazo kuphela, kodwa ngenyani ukwenza kwakhona umsebenzi kwasekuqaleni. Oku kunokuba kukuqhubekeka kweziganeko zoqobo, ewe, kuthathelwa ingqalelo ukuba azinalo ixabiso elongeziweyo leyantlandlolo, ukuba bathathe ixesha elininzi kwaye bayadika.
Sinokuqinisekisa ukuba abayili bayathanda kwaye banomdla wokudala basebenzise nantoni na abanokufikelela kuyo, ukusuka kwinto eyayiyipensile ngaphambili ukuya kwinto esiyaziyo ngoku njengekhompyuter, singasathethi ke ngayo yonke into abanokuyisebenzisa ukwenza naluphina uluvo. Ngesi sizathu, amalinge afana Mnumzana omangalisayo Ziyamangalisa okanye mhlawumbi zifana nemisebenzi yomyili uJulien Vallée, ezingabonakaliyo emehlweni abaqulunqi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Idizayini yeMifanekiso » Uyila njani? Ngesandla okanye ngomatshini?
UIsake rasqui sitsho
NgeMicrosoft Paint xD
Phendula u-Isaac Rasqui